Kitra – COSAFA U20: raraka teo amin’ny manasa-dalana ny Barea | NewsMada
Kitra – COSAFA U20: raraka teo amin’ny manasa-dalana ny Barea
Par Taratra sur 13/12/2019
Nifarana teo amin’ny manasa-dalana ny lalan’ny Barean’i Madagasikara, ao anatin’ny fiadiana ny “Cosafa Cup U20”, taranja baolina kitra, tanterahina any Zambia. Nalavon’ny Bafana Bafana Afrika Atsimo, 5 no ho 4, teo amin’ny “tirs au but” ny ekipa malagasy.
Ady sahala 2 no ho 2 no nisarahan’ny roa tonta teo amin’ny fiafaran’ny fe-potoana ara-dalàna ka niditra tamin’ny fandakana ny “tirs au but”, no izao resy 5 no ho 4 izao. Raha hiverenana ny fizotran’ny lalao, izay natao tatsy Lusaka Zambia, azo lazaina ho tsara fanombohana ny Barean’i Madagasikara, izay efa nitarika tamin’ny isa 2 no ho 0 teo am-pialantsasatra, tamin’ny alalan’ny baolina tafiditr’i Vévé (11’) sy Arnaud (29’). Efa tany amin’ny lalao famaranana teo ny tongotr’ilan’ity ekipan’i Menahely Ruffin ity, saingy tsy izay no nitranga. Nanao totoafo sy tsy nanaiky hatramin’ny farany ry zareo Afrikana tatsimo teo amin’ny fizaram-potoana faharoa. Vokany, nahatafiditra baolina voalohany izy ireo, taty amin’ny minitra faha-66, tamin’ny alalan’i Appolis, mbola tsy tana hatrany ity mpilalao ity taty amin’ny minitra faha-90+2, fa mbola nahatafiditra baolina fanindroany, ka nitondra ny isa ho 2 no ho 2.
Lesoka ary tsy mbola voahitsin’ny mpanazatra ny Barean’i Madagasikara tamin’ity, ny tsy fahaizana mitazona ny tombon’isa azo, toy ny efa nitranga tamin’ny fihaonana teo amin’ny Club M Maorisiana, izay mbola nahatafiditra baolina iray taty amin’ny fizaram-potoana faharoa ary saika ratsy raha nahatafiditra baolina fanindroany teo ny Maorisiana tamin’izay. Mbola nitranga indray izany tsy fahamafisan’ny fiarovantenan’ny Barea izany tamin’ity fihaonana tamin-dry zareo Afrikana tatsimo ity, ka dia iny voaenjiky ry zareo hatrany amin’ny ora fanampiny iny ny isa, izay novidian-dafo tokoa. Nifarana hatreo, araka izany, ny nofinofin’ny Barea U20 ireto. Tsahivina, ny taona 2005 no nahazo ny amboaran’ny “Cosafa” ny Barea, teo amin’ity sokajy ity.
Any amin’ny toerana fahatelo izany sisa no hiadivana mafy ho an’ity ekipam-pirenena malagasy ity, izay tsorina fa misy antenaina betsaka ny hoaviny. Rahampitso asabotsy ny hanatanterahina io fiadian-toerana fahatelo io.